I-Philips yaziwa njengomhlinzeki wamadivayisi eselula asebenzayo, kodwa asebenzayo futhi athembekile. Phakathi kwabo - ama-classic monoblock amafoni E160. Lawa madivayisi asekela imisebenzi ethandwa kakhulu yokukhulumisana futhi enomthombo omkhulu wokusebenza okuzimele. Yiziphi izici eziyinhloko zamafoni e-E160? Abasebenzisi bahlola kanjani izinga lomsebenzi wabo?
Ifoni "i-Philips" E160, ukubuyekezwa kwayo, ngenxa yokuphakama okuphezulu kule divayisi kuvame ukutholakala kuma-portal e-intanethi, kuyisigaba samakhompiyutha we-classic, ayodwa. Yenzelwe ukusebenza ngama-SIM-amakhadi angu-2 (ngalinye lawo angakha amaqembu ahlukene oxhumana nabo).
Phakathi kwezici eziphawulekayo zefoni ye- "Philips" E160 (ukubuyekezwa kungaqinisekiswa yiyo) ibhethri enekhono eliqinisekisa ukuzimela kwedivayisi, uma ufunda incazelo evela kumenzi wedivaysi, isikhathi sokukhuluma singamahora angu-8, futhi kumodi yokulinda - kufika ku-35.
Idivayisi ifakwe ikhamera yekhnoloji ye-residual, ongayithatha izithombe ngesinqumo se-640 ngamaphikseli angu-480. Futhi amafayela angathunyelwa kubangani nge-MMS. Ifoni ifakwe izixazululo eziphawulekayo ze-multimedia - FM-receiver, umdlali we-MP3. Ungakwazi ukuxhuma i-headset efonini. Ungadlulisa amafayela kusuka kudivayisi ngokusebenzisa iziteshi ze-intanethi, futhi uma izinsiza zabo zinganele - nge-USB noma nge-Bluetooth. Uma kunesidingo, ungasebenzisa i-flashlight eyakhelwe ngaphakathi.
Ake sicabangele ngokuningiliziwe ngamathuba ayisisekelo efonini ephathekayo ethi "Philips" i-Xenium Е160. Izici zaleli divayisi, ongazilalela kuqala, zilandelayo:
- ubukhulu - 120.5 x 51 x 14.5 mm;
- isisindo - 93.9 g;
- I-Antenna - uhlobo olwakhiwe ngaphakathi;
- ukubonisa - i-TFT ngesinqumo sama-pixel angama-240 angama-320, i-diagonal of 2.4 amayintshi, ekwazi ukubonisa imibala engaba ngu-262,000;
- ukwesekwa kobuchwepheshe bokuxhumana - GSM, WAP 2.0;
- ibhetri - enezigidi eziyi-1.6 zama-AA;
- ukweseka ama-SIM-amakhadi amabili;
- ukuba khona kwekhamera.
Imisebenzi eyisisekelo yedivayisi
Ifoni isekela imisebenzi elandelayo:
- ukubeka njengezingoma zama MP3 ukuncenceza, ukuncenceza kwamafonti;
- Ukudlala kwamafayela emafomethi ama-MP3, AMR, MIDI, kanye ne-AAC;
- ikhono lokuxhuma amakhadi omemori angaphandle kwifomethi ye-Micro SD kuze kufike ku-32 GB;
- ukudluliswa kwedatha nge-Bluetooth.
Ifoni ilawulwa uhlelo lokusebenza lokufaka uphawu, lapho imisebenzi efana nalokhu:
- ukurekhoda kwamakholi nesikhathi sokuxoxa;
- ukwenza izingcingo eziphuthumayo;
- Thulisa imakrofoni;
- ukubukela izingcingo ezingabanjwanga futhi zamukelwe;
- ukuqondisa kabusha izingcingo, ukubamba, ukulinda;
- buka isikhathi esaboniswa kwiwashi le-digital;
- Ukurekhoda komsindo ngerekhoda yezwi eyakhelwe ngaphakathi.
Esikhathini sesistimu yokusebenza yefoni kunezinhlelo ezinjengalezi: iwashi le-alamu, wokubala, ikhalenda, isitophuwashi. Umsebenzisi "i-Philips E160" (ukubuyekezwa kubonisa lokhu okukhethwa kahle kakhulu) kungasetha, ukusebenzisa amathuluzi ohlelo lokusebenza ukwenza izilungiselelo zakho siqu. Lesi sici siyisici esibalulekile lapho sikhetha idivayisi ngomsebenzisi.
Manje ake sihlole ukuthi abasebenzisi bahlola kanjani ukusebenza okwenziwa yi Philips E160. Ukubuyekezwa kwabanikazi befoni kungacwaningwa kumongo wezingxenye zayo ezinkulu zehadiwe:
- amamojula wokuxhumana;
- Isistimu yokusebenza.
Futhi, idivaysi ingabonakala ngokuhlola kokusetshenziswa kwabasebenzisi bekhwalithi yokudlulisela nokudlala umsindo, ukubukeka kwedivayisi, ikhwalithi yomhlangano wayo, kulula ukusebenzisa idivayisi ehambisanayo.
Isikrini sefoni: ukubuyekezwa
Yiqiniso, ukuboniswa kwefoni kuvamile kakhulu izixazululo zeselula zesimanje, ukuxazulula nokujula kombala. Kodwa uma sikhuluma ngokuqondile ngengxenye lapho kufakwa khona ifoni ye-Philips E160 (ukubuyekezwa kwabanikazi bayo kungakuqinisekisa lokhu), khona-ke izici zesikrini zihambisana nalokho okutholakala ngezixazululo zokuncintisana.
Into esemqoka ukuthi umbhalo ubonakala ngokucacile ekubonisweni, kanye nokuqukethwe okuyinhloko kwamafayela e-multimedia, uma kulandwa kwifoni noma kulandwa ngekhebula. Ukubonakala okuhle okubalulekile kwesiboniso uma usebenzisa imisebenzi yesistimu yokusebenza: nale nkinga, ngenxa yekhwalithi yokubonisa, njengoba kuboniswe ngabasebenzisi, cishe akukho.
Manje sizofunda ukuthi abanikazi bedivayisi bahlola ikhwalithi yamamojula wokuxhumana ukuthi ifoni ye-Philips E160 ifakwe. Impendulo evela kubasebenzisi mayelana nalezi zinketho ingahlukaniswa.
Ngakho-ke, kukhona iqembu lemibono mayelana nokuthi ifoni ayinayo ukwesekwa okwanele ezindinganisweni zokuxhumana zanamuhla - njenge-3G ne-WiFi. Kodwa uma ubheka intengo yedivayisi - kholwa abanikazi abanombono ohlukile kule akhawunti, kungaqondakala ukuthi izixazululo ezimbalwa ezinokuncintisana zihlanganisa izinketho ezinjalo. Ukuntuleka kwe-3G ne-WiFi kuvamile kakhulu kumafoni weselula kwisigaba sesabelomali, futhi ngale ndlela umshini we-E160 awuhlukile. Kulesi simo, ukudluliswa kwefayela kungenziwa njalo ngekhebula le-USB, i-Bluetooth noma ezimweni ezimbi kakhulu usebenzisa izinga le-WAP 2.0, uma-ke, ukukhokhelwa kwemali ku-opharetha kuvumela.
Ngokuqondene namamojula wokuxhumana okwamanje yedivayisi - izinga lomsebenzi wabo lilinganiswa kahle. Ngokubasebenzisi, ukudluliswa kwedatha nge-Bluetooth noma ngokusebenzisa ucingo kwenziwa ngokujwayelekile ngaphandle kobunzima obukhethekile. Ngokuphathelene ne-GSM yesimo sefoni Philips Xenium E160 - impendulo evela kubanikazi bedivaysi ingaqinisekisa lokhu, ibuye isebenze kahle, ihlinzeke ngokudluliswa kwezwi ngekhwalithi ephakeme, i-SMS ne-MMS - ngaphandle kokugqokwa okukhethekile, uma kunjalo ohlangothini lwabo opharetha, konke kuhambisane nokuhleleka.
Ibhethri yefoni: ukubuyekezwa
Okungenzeka kakhulu, inketho yokuncintisana yefoni ebuzwayo ibhethri. Abasebenzisi abaningi bathenga le divayisi, okokuqala, ukuze bakwazi ukusebenzisa amandla ayo ngokuhlinzeka ngomsebenzi wokuzimela. Lezi zimingcele zebhethri ezifunwa ngumkhiqizi we-Philips E160 - impendulo evela kubathengi befoni ingaqinisekisa ukuthi ngokuvamile kuvunyelwe ukuhlolwa kwangempela kwedivayisi. Ngempela, inganikeza umsebenzi wokuzimela enkulumweni yenkulumo ehlala cishe amahora angu-8, elinde cishe amahora angu-35. Lezi zinkomba azitholakali ngisho nakumafoni amaningi angamanje ama-premium (ngaphandle kokuthi, eqinisweni, asikhulumi ngokusetshenziswa kwamamodeli akhethekile ngamabhethri okwenyuka komthamo, kodwa ngisho nakulezi zidivayisi ezimbalwa ziyakwazi ukufeza lezi zinkomba zokuphila kwebhethri).
Ibhethri yefoni ithengiswa ngokushesha, inikwe amandla - ngokuphathelene nokusetshenziswa kwamamodeli athile wedivayisi. Ngokuyinhloko, ezimweni eziningi, ungakwazi ukubala lapho ibhethri selizocwila, futhi, cishe, sinesikhathi sokusebenzisa ishaja.
Ukusebenzisa uhlelo lokusebenza lwefoni: ukubuyekezwa
Manje ake sicabangele ukuthi abasebenzisi bahlola kanjani ikhwalithi yokusebenza kwesistimu yokusebenza ye-Philips E160. Izici, ukubuyekezwa okuphathelene nayo - isici esibalulekile sokutadisha kwamakhono wangempela amadivayisi, ukuhlolwa kwekhwalithi yomsebenzi wayo. Njengoba siphakamise ngenhla, ifoni ilawulwa uhlelo lokusebenzisa uphawu. Ihlinzekwa ngesakhiwo esilula: akubandakanyi ukuthunyelwa kwamamenyu e-screen esiyinkimbinkimbi, kanye nokusetshenziswa kwenani elikhulu lezicelo.
Yiqiniso, umsebenzisi, ojwayele ukuvakashela izitolo ze-intanethi zezinhlelo zezinsiza zeselula, amandla okusebenza angabonakala ekhawulelwe kakhulu. Kodwa kusukela ekubukeni kokusebenza kokuxazulula imisebenzi eyisisekelo yomsebenzisi, i-OS efakwe efonini yenza imisebenzi yayo ngokuphelele - ukuhlinzeka umsebenzisi ngezikhungo ezizinzile ekwenzeni izingcingo, ukuthumela imiyalezo, ukulawula izingcingo.
Umsebenzi oyinhloko yocingo le-Philips Xenium E160 eklanyelwe ukukwenza - ukubuyekezwa mayelana nalokhu kungenzeka kakhulu, kuyamukelwa nokudluliswa komsindo ngesikhathi izingxoxo zocingo zomsebenzisi. Ngaphezu kwalokho, njengoba sibonile ekuqaleni kwalesi sihloko, idivayisi ingadlala amafayili ama-MP3, kanye nezingoma ezihlukahlukene ze-polyphonic.
Izidingo eziyinhloko zefoni kulokhu - ukukhiqiza umsindo ophezulu, kanye nokusebenza okuqinile uma umsebenzisi esebenzisa umsebenzi ofanelekile. Njengoba abanikazi bedivayisi bacabangela, kuphumelela kakhulu ekuxazululeni izinkinga ezinjalo. Naphezu kokuthi umsebenzi wokuthola nokudlulisa umsindo ubonakala ulula, eqinisweni, ubuchwepheshe obuqaliswa ngabakhiqizi befoni mobile buyinkimbinkimbi kakhulu futhi bufuna ukutshalwa kwezimali okuphawulekayo ekuthuthukiseni nasekuthuthukiseni. Ngokuvamile, inkampani ethi "Philips", ihlangabezana nomsebenzi - ukumelana nomncintiswano ngokuhlinzekela amafoni akhiqizwa ngamamojula ezobuchwepheshe wokuthola nokudlulisa umsindo. Kanye, eqinisweni, futhi ukudlala emafomethi ahlukahlukene wefayela.
Ukubukeka kwefoni nokwakha ikhwalithi
Ukubukeka kanye nekhwalithi yesampula kuyisici esibalulekile ekuhloleni jikelele kwanoma iyiphi idivayisi yeselula. Akuhlukile futhi umakhalekhukhwini "Philips" E160. Impendulo yabanikazi bayo kulezi zici iyona enhle kakhulu. Kubasebenzisi abaningi, ukubukeka nomhlangano kuphakathi kwezinqubo eziyinhloko zokukhetha ifoni emele endaweni ehambelanayo. Ngempela, uma ifoni enkulu ngokwemisebenzi nokusekelwa kwezokuxhumana zanamuhla akudingekile - noma ngabe ihlangene kuyoba yikhwalithi futhi ibukeke ihloniphekile. Kusukela kulo mbono, idivaysi ekhonjiwe ingabhekwa kalula kwizixazululo eziholayo esigabeni sayo. Akuningi kakhulu emakethe yefoni kusuka emikhiqizo yangaphandle eyobe iboniswe ngekhwalithi ephezulu yendibano ye-hull.
Uma sikhuluma ngomklamo - Yebo, kungabonakala kulula. Kodwa kulokhu ungabona inzuzo yalo: ifomu laconic ngokuvamile liwuphawu lokunambitheka okuhle. Ikakhulukazi uma kungekhona ngamagugu angabazekayo angase afaneleke ekuklanyweni kwefoni yezinga eliphakeme, kodwa kulokhu - bayoba abangenakuqhathaniswa.
Ukulula ukusetshenziswa kwedivayisi
Esinye isici esibalulekile sedivaysi ephathekayo yindlela elula ukuyisebenzisa. Ngabe umakhalekhukhwini u-Philips E160 uhlolwe kanjani ngalokhu? Ukubuyekezwa komsebenzisi lapha, futhi, ezimweni eziningi zihlukile. Abanye abanikazi befoni bakholelwa ukuthi ekulawuleni kunzima kakhulu, ikakhulukazi, kunikezwa uhla oluncane lwemisebenzi yalo. Ngempela, ukuhlelwa kwemenyu yohlelo lwefoni kungase kubonakale kunzima ngandlela-thile. Kodwa abanye bakholelwa ukuthi udinga nje ukuzijwayela, futhi ukufinyelela ezinketweni ezifanele kungenziwa ngokushesha kakhulu. Ngakho-ke, isakhiwo semenyu - kungakhathaliseki ukuthi kunzima (ngesikhathi esisodwa kungumqondo wokuhlola), kodwa kunengqiqo kakhulu.
Ngakho-ke, sihlole izici eziyisisekelo zalolu divayisi njengefoni ye-Philips Xenium E160, ukubuyekezwa ngakho ngabasebenzisi. Iziphi iziphetho esingasithola?
Ngokusekelwe kokulinganiselwa komsebenzisi, kanye nohlu lwezici, kusemthethweni ukugqamisa amaphuzu aqinile alandelayo wedivayisi:
- Ibhethri elinamandla;
- izinga eliphezulu lomsebenzi wamamodeli wokuxhumana;
- Umhlangano omuhle kakhulu.
Ngesikhathi esifanayo, ifoni engxenyeni yezinketho ezimakwe kungathiwa ngokuqondile kubaholi bezingxenye. Uma sikhuluma ngeziphambeko zedivayisi, lezi zitholakala ngokuyinhloko ngokuqhathaniswa kwamathuba anesidingo esinesisombululo seselula esivamile. Ngokuyinhloko, ukungabi nesekelo lwe-3G ne-Wi-Fi, nakuba kungenjalo, kungabhekwa njengamaphuzu abuthakathaka efonini, empeleni le nsigugu ayikwazi ukubhekwa njengephutha eligcwele kudivayisi, njengamasu okuncintisana lawa ma modemu kaningi ayitholakali. Ngesikhathi esifanayo, umbuzo omkhulu wukuthi amadivaysi avela kubakhiqizi bezithathu angakwazi ukuhlinzeka, ikakhulukazi, izinkomba ezifaniswayo zokusebenza okuzimele.